Ukuqashelwa kobuso be-Samsung Galaxy S8 entsha akuphephile | Izindaba zamagajethi
Ukuqashelwa kobuso be-Samsung Galaxy S8 entsha akuphephile
Lokhu kungamandla esinamandla okuhlukanisa ukuphepha uhlelo olusha lokuvula lwe-Samsung Galaxy S8 elisanda kusinika. Futhi kungenxa yokuthi kuyiqiniso ukuthi amadivayisi ababekhona emcimbini ababenawo kungenzeka kungabi yiwona azothengiswa kungekudala, uhlelo lokuqashelwa ubuso lwehluleka ukuphepha futhi lwehluleka kakhulu ukuthi kungenzeka ukuvula idivayisi ngesithombe esibekwe phambi kwenzwa efanayo. Konke lokhu namuhla kunendawo yokuthuthuka futhi kuyacaca ukuthi kunezinye izinhlelo ezitholakala ocingweni ezifana nenzwa yezigxivizo zeminwe noma inzwa ye-iris esebenza kahle kulokhu.
Okwalabo namanje abangakukholwa, ungakubona kuvidiyo lapho kuboniswa khona ukuthi kwenzeka kanjani i-Galaxy S8 ivuliwe ngesithombe esilula ibekwe phambi kwedivayisi:
Ngakho-ke kuqinisekile ukuthi inkampani kufanele isebenze kulokhu futhi isebenze nale nketho entsha ene-Samsung Galaxy S8 ne-S8 + enhle kakhulu ukuze esikhathini esizayo esiseduze kakhulu inkinga ixazululwe. Amanye amahlebezi ayesevele ememezela ukuthi ubuchwepheshe bokuqashelwa ubuso babuluhlaza ngale ndlela futhi lokhu kukhonjiswa kuvidiyo lapho ngesithombe esilula sikwazi ukufinyelela kudivayisi futhi singavalelisa kukho konke ukuphepha noma ubumfihlo. Iqiniso ngukuthi ngokujwayelekile amadivayisi amasha ayamangaza ngenxa yokwakheka nezici ezihlinzekwayo, kepha kuyadingeka ukulungisa lezi ziphutha ezinkulu zokuphepha noma ukweluleka ngokusetshenziswa kwazo kuze kube zingasebenzi kangako ngo-100% sibeka idatha yethu engcupheni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ukuqashelwa kobuso be-Samsung Galaxy S8 entsha akuphephile
UGema Lopez kusho
Ungangitsheli, ibona isithombe njengomsebenzisi hahaha… bantshontsha umakhalekhukhwini wakho bakuthathe isithombe ukuze usivule ??? #BravoSamsung
Phendula ku-Gema Lopez
I-iPad entsha ifana kakhulu ne-iPad Air ngokwe-iFixit
INetflix ihambisa izitembu zomkhiqizo wayo ezinconyiwe kanye nama-LG TV win